MAAMULKA KISMAAYO OO SHEEGAY IN UU XIDHIIDH KA DHAXEEYO ALQAACIDA SOONA DHAWEYEY HADLAKII OSAMA | Toggaherer's Weblog
MARKAB HOR LEH OO HINDIYA LAGA LEEYAHAY OO LAGU AFDUUBTAY XEEBAHA SOMALIYA
Kismaayo 22 Mar 2009 THN
Sheekh Xasan Yacquub Xasan oo ah Madaxa Warfaafinta Maamulka Islaamiga ah ee magaalada Kismaayo ayaa shir jaraa’id oo shalay uu ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolada Jubada Hoose waxa uu ku sheegay inuu soo dhoweynayo isla markaasina taageersan yahay hadalka dhowaan ka soo yeeray Hoggaamiyaha ururka Al-qaacida Usaama Bin Laden.
“Osaama waxaad moodaa inuu uga xog-ogaalsan yahay xaaladda dalka Culimada halkaan joogta, wuxuuna uga hadlay xaaladda dalka si xaqiiqo ah” ayuu yiri Afhayeenka maamulka magaalada Kismaayo Sheekh Xasan Yacquub oo sheegay in fariinta Usaama ay ahayd mid soo baxday xilligii loo baahnaa.
Madaxa warfaafinta Maamulka Islaamiga ah ee magaalada Kismaayo Sheekh Xasan Yacquub wuxuu sheegay in hoggaamiyaha ururka Al-qaacidan uu xaq u leeyahay inuu soo farageliyo qaddiyadda Muslimiinta caalamka sida ay Maraykanka iyo Qaramada Midoobayba u soo fara geliyaan, wuxuuna intaasi ku daray in gaalo aysan marnaba raali ka noqonaynin Muslimiinta.
“Anaga iyo Osama Bin Laden waxaa na xiriirinaya jihaadka caalamiga ah ee ka socda wadamada Islaamka” ayuu yiri Sheekh Xasan Yacquub oo sheegay in dadka wax ka sheegaya hadalka Uasama Bin Laden ay uga haboon tahay inay wax ka sheegaan sida uu yiri Q/Midoobay, Mareykanka iyo Dowladda Itoobiya kuwaasi oo uu ku eedeeyay inay farageliyeen arrimaha dalka Soomaaliya.
“Jihaadka Soomaaliya ka socda waa mid caalami ah oo dalka looga saarayo gaalada Burundi iyo Uganda ee joogta Garoomadeena iyo dekadaheena” ayuu yiri Sheekh Xasan Yacquub oo sheegay in marnaba aanu joogsan doonin jihaadka ka socda dalka Soomaaliya, isla markaasina ay waxba kama jiraan tahay inuu joogsaday jihaadkii dalka ka socday.